News Collection: यसको उपचार छ कि छैन ?
म २७ वर्षीया महिला हुँ। मेरा श्रीमान् विदेशमा हुनुहुन्छ। मलाई परपुरुषसँग सम्बन्ध गाँस्ने इच्छा छैन। त्यसैले म दैनिक हस्तमैथुन गर्छु। त्यसले भोलि गएर स्वास्थ्यमा खराब पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन ? फेरि मेरो योनीबाट एकदमै गन्हाउने सेतो पानी जान्छ। १५-२० मिनेटको फरकमा आफैं झरिरहन्छ। यसको उपचार छ कि छैन ?
अचेल नेपालबाट धेरै व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर छन्। आफ्नो यौनजोडीसँग लामो समयसम्म भेट नहुने स्थितिमा यौनआनन्दका लागि वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्नु आवश्यकता पनि बन्न पुगेको छ। विदेश जानेका लागि मात्र होइन, नेपालमै बस्नेका लागि पनि। यस्तो बेलामा यौनचाहना पूरा गर्ने आवश्यकता भए पनि अर्को पुरुष व्यक्तिसँग सम्बन्ध नगाँस्ने तपाइर्ंको विचारको कदर गर्छौं। वैवाहिक सम्बन्धभन्दा बाहिरको सम्बन्धले अनेक समस्या उब्जाउन सक्छ। यस्तो स्थितिमा हस्तमैथुन एकदमै राम्रो विकल्प हो।
यौनआनन्द प्राप्त गर्न अनि यौन तृष्णा शान्त पार्न आफ्नो यौनाङ्ग वा यौन संवेदनशील अङ्ग आफैंले चलाउने क्रियाकलाप नै हस्तमैथुन हो। कतिपयले पुरुषले हस्तमैथुन गर्ने भए पनि महिलाले गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, जुन सत्य होइन। पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूले कम हस्तमैथुन गर्ने भए पनि उनीहरूले हस्तमैथुन गर्ने तरिकामा विविधता भने बढी हुन्छ। भगांकुर चलाउनु वा घर्षण गर्नु हस्तमैथुनको एउटा प्रमुख उपाय हो। यो ९० प्रतिशत महिलामा यौन संवेदनशीलताको केन्द्रका रूपमा रहेको हुन्छ। आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुरा वा तरिकाले यसलाई चलाउन सकिन्छ वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्ने जस्ता अनेक उपाय गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी अर्को प्रमुख उपाय योनिमा केही पसाउनु हो। यसो गर्दा योनिबाट पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनुपर्छ र यौन उत्तेजना हुँदा यो स्वाभाविक रूपमै हुन्छ। यस्तो नभएको स्थितिमा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थको प्रयोग गर्न भने बिर्सनु हुँदैन। यस्तो पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। औंला पसाउँदा योनिमा आफूलाई आनन्द पाउने स्थान खोज्न सकिन्छ। भगांकुर होस् वा योनि, हस्तमैथुनमा औंलाको प्रयोग नै महत्वपूर्ण हुन्छ। औंला बहुउपयोगी हुने भएकाले नै चाहेअनुरूप दबाब, गति, तरिकामा गर्न सकिन्छ, जसले आनन्द थप्छ नै। यीबाहेक महिला शरीरका अन्य अङ्गहरूको स्पर्श, मर्दन वा सुमसुम्याई यौनआनन्द पाउने कुरामा सहायक नै हुन्छन्, तर अचेल यसरी यौनआनन्द लिने क्रममा महिलाहरूले यौन प्रसाधन वा वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। कतिपयले पुरुषको लिङ्ग आकारको कृत्रिम वा प्राकृतिक वस्तु पनि प्रयोग गर्छन्। अंग्रेजीमा भाइब्रेटर भनिने यौन प्रसाधन विभिन्न किसिमको आकार-प्रकारमा पाइन्छन्।
के महिलाले हस्तमैथुन गर्दा हानि हुन्छ ?
पक्कै हुँदैन। सर्वप्रथम त हस्तमैथुनले यौन इच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ। तनावबाट मुक्त मानिस बढी सकारात्मक भै सिर्जनशील हुनसक्छ। यसरी यौनचाहना शान्त पार्न मद्दत पुर्‍याउने भएकाले कतिपय यौन अपराधलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ भन्नेहरू पनि थुप्रै छन्। यौन आनन्द प्रदान गर्ने कुराका साथै यसका अन्य फाइदा पनि छन्। हस्तमैथुनले यौन अङ्गविशेषलाई राम्रोसँग नियालेर हेर्ने, अङ्ग-प्रत्यङ्गलाई जान्ने अवसर दिनुका साथै आफैंलाई आनन्द दिने कार्यमा सहयोग गर्ने मात्र होइन, मौकामा यौनजोडीलाई पनि कसरी यौनसुख प्रदान गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन मद्दत गर्छ। हस्तमैथुन गर्दा अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क नहुने भएपछि एचआईभीजस्ता यौन रोगबाट बच्न सकिन्छ, अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्धले ल्याउने जटिलता वा समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ। आफैंले गर्न सकिने भएकाले आफ्नो चाहनाअनुसार पायक पर्ने समयमा गर्न सकिने भयो। यस्तै हस्तमैथुनले अनावश्यक गर्भधारण, अन्य व्यक्तिसँगको यौनसम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने धन तथा समयको दुरुपयोगबाट
स्वाभाविक रूपमा योनि ओसिलो नै हुन्छ। योनिबाट सेतो पानीजस्तो पदार्थ बग्नुलाई योनिश्राव भनिन्छ, तर यसो हुनुको अर्थ सधैं रोग लागेको भन्ने लाग्दैन। हाम्रो सामान्य शरीरक्रियासँग सम्बन्धित र स्वाभाविक रूपमा पनि योनिश्राव हुन्छ। यस्तो स्वाभाविक योनिश्राव महिनावारी हुने बेलामा वा यौन उत्तेजना भएको बेलामा हुन्छ। पाठेघरको मुखबाट हुने श्राव यस्तै महिनावारी भएको एक सातापछि सुरु भएर डिम्बनिष्कासनको बेलासम्म हुन्छ। यौन उत्तेजनाका बेलामा यसरी योनिश्राव हुनुले यौन सम्पर्कलाई सजिलो बनाउनुका साथै शुक्रकीटका लागि अनुकुल स्थिति सिर्जना गर्छ। यस्ता स्वाभाविक किसिमको योनिश्रावका लागि कुनै किसिमको उपचारको आवश्यकता पर्दैन।
यीबाहेक, प्रजनन अंगका संक्रमणहरू, जसमा यौनरोग पनि पर्छ, अस्वाभाविक योनिश्राव हुने प्रमुख कारण हुन्। सामान्य रूपमा योनिबाट आउने श्रावभन्दा धेरै बढी मात्रामा आउने, गन्हाउने किसिमको वा मैलो किसिमको योनिश्राव हुन थाले त्यसलाई अस्वाभाविक योनिश्राव भनेर बुझ्नुपर्छ। गन्हाउने र छिन-छिनमा आउनेदेखि अन्य कुरा पनि हुने भए पर्याप्त जानकारी दिनु भए समस्या पहिचान गर्न सजिलो हुने थियो।
यौन अंगका सरसफाइको कमी तथा कमजोर स्वास्थ्यले पनि प्रजनन अङ्गको संक्रमणलाई बढाउँछ। कडा किसिमको साबुन वा डियोडेरान्टको प्रयोग गर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी डूस दिएर योनि सफा गर्ने, एन्टिबायोटिकजस्ता औषधीको अनावश्यक प्रयोगले पनि यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता कुराको अनावश्यक प्रयोग गर्नु हुँदैन। दिनहुँ भित्री पहिरन फेर्नुपर्छ। यस्ता भित्री पहिरन सुतीको हुनु आवश्यक छ।
अस्वाभाविक योनिश्राव गन्हाउने त हुन्छ नै, तर स्वाभाविक योनिश्रावको पनि आफ्नै एक विशेष गन्ध हुन्छ। यदि त्यसैलाई गन्धरहित पार्नुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको भए सायद सम्भव नहोला। तपाईंलाई आफूलाई असामान्य रूपमा अति नै गन्हाउने जस्तो लागे पनि अरू कसैले गन्हाएको कुरा गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको योनिश्रावको गन्ध सामान्य भएर पनि गन्हाएजस्तो मात्र लागेको हो भने मनोवैज्ञानिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्छ, तर पनि एकपल्ट पक्का हुन स्त्रीरोग विशेषज्ञको सल्लाहमा योनिश्रावको परीक्षण गराउनु बेस हुन्छ।